Golaha xildhibaanada mareykanka oo ku gacan seeray qaraar u fasaxaya maamulka Obama hawlgalada milatari ee dalka Libya
Washington:- Golaha xildhibaanada barlamanka mareykanka oo tirada ugu badan ay yihiin xisbiga Jumhuuriga ayaa ku gacan seeray mashruuc ogolanaya in mareykanku uu qaab milatari u farageliyo dalka Libya.
Mashruucan ayaa waxa ka hor yimid 295 xildhibaan iyadoo 123 xildhibaan ay taageeraan.
Sidoo kale xildhibaanada ayaa la filayaa in ay u codeeyaan qaraar kale oo looga dan leeyahay in lagu yareeyo xadiga howlgalka mareykanka ee dalka Libya.
Xildhibaanada xisbiga dimuqaraadiga ayaa ka carooday dhabar jabka xisbigoodu kala kulmay qaraarkan maadaama madaxweynaha uusan horey u weydiisan Congress-ka ka hor inta uusan amar ku bixin in weerar cirka ah lagu qaado maamulka madaxweyne Qadaafi.
Madaxa golaha xildhibaanada mareykanka ninka lagu magacaabo John Buunar oo isna ka soo jeeda xisbiga Jumhuuriga ayaa horey u sheegay in mashruucan uu yahay dagaal u dhexeeya madaxweyne Obama iyo Congress-ka mareykanka maadaama madaxweynuhu uusan goluhu kala tashan ka hor inta uusan ka qeyb galin howlgalada NATO ee dalka Libya.
Sidoo kale qaar kale oo katirsan xisbiga Obama ayaa ku eedeeyey madaxweynuhu in uu dhinac maray xeerka awooda dagaalka ee sanaddii 1973 kaasi oo loola jeeda in xayiraad lagu soo rogi karo awooda madaxweynaha ee hogaaminta dagaalka.
Dhanka kale xoghayaha arrimaha dibadda mareykanka Hillary Clinton ayaa kulamo albaabada u xiran yihiin la yeelatay qaar kamid ah xildhibaanada xisbiga dimuqaraadiga si taageero ugu hesho dagaalka dowladda mareykanku ay lugaha kula jirto ee ka socda dalka Libya islamrkaana waxa ay ku boorisay xildhibaanada dimuqaraadiga in aysan gacamaha ka laaban mashruucan.
Hogaamiyaha dimuqaraadiga laga tirada badan yahay ee golaha barlamanka haweenayda lagu magcaabo Nancy Biloowsi ayaa sheegtay in ay aaminsan tahay in madaxweynuhu awood u leeyahay in uu sameeyo talaabadii uu qaaday maadama uusan ciidanka dhulka ah uusan u dirin dalka Libya.
China oo daafacday booqashada madaxweyne Al-bashiir ee dalkeeda
Beijing:- Ergayga gaarka ah ee China arrimaha Africa Liyuu Kuuy Jiin ayaa sheegay in dalkiisu uusan dheg jalaq u siin doonin hadalada ka soo yeeraya maxkamadda dambiyada caalamka maadaama China aysan xubin ka ahayn islamarkaana aysan aqoonsanayn heshiiskii Roma ee dhigaya in lagu shaqeeyo xeerarka maxakamdda dambiyada caalamka.
Mr Jiin ayaa tilmaamay in booqashada madaxweyne Al-bashiir ee dalka China ay tahay mid uu ku soo ajiibay casumaad uu u fidiyey dhigiisa China Mr Huu Jiintaaw sanaddii 2007 xilligaas oo uu booqday madaxweynaha china dalka Sudan.
Ergayga ayaa sidoo kale sheegay in dalkiisu aqoonsan doono koonfurta Sudan markii ay ku dhawaaqdo madaxbanaanideeda 9 bisha July ee soo socota.
Sidoo kale ergayga oo wareysi siiyey wakaaladda wararka ee Shinkhuwa ayaa balan qaaday in dalkiisu uu sii wadi doono dadaalka beesha caalamka ugu jirto sidii nabad loogu soo dabaali la ahaa koonfurta iyo woqooyiga Sudan.
Dhanka kale dowladda mareykanka ayaa cambaareesay talaabda China ay dalkeeda ugu martiqaaday madaxwene Al-bashiir oo ay maxkamadda ICC ay ku eedeysay in uu xasuuq ka geystay gobolka Daarfuur ee galbeedka Sudan.
Xildhibaan katirsan xisbiga Jumhuuriga oo lagu magcaabo Frank Wolf oo dhawaan booqasho ku tagay gobolka Daarfuur ayaa sheegay in uu indhihiisa ku soo arkay Helicopters ay dowladda Shiinaha ugu deeqday xukuumadda Sudan.
Nasrallah oo sheegay in ururka xisbullah uu qabtay dad la shaqeenayey sirdoonka mareykanka iyo Yuhuuda
Beirut:- Xoghayaha guu ee ururka Xisbullah Sheekh Xasan Nasrallah ayaa shaaca ka qaaday in xisbigiisu uu gacanta ku dhigay saddex jawaasiis oo xubno ka ahaa ururka uu hogaamiyo ee Xisbullah.
Dhanka kale Nasrallah oo ka hadlayey xukuumadda cusub ee uu soo dhisay Najiib Miiqaati dalka Lubnaan, waxa uu tilmaamay in ay tahay xukuumad %100 ay soo dhisteen Lubnaaniyiinta islamrkaana aysan jirin waxa faragelin dibadda ah oo ku saabsan qaabkii loo dhisi lahaa xukuumad cusub.
Nasrallah ayaa cadeeyey in sababihii keenay dib u dhaca dhistaanka xukuumada ay ahayd faragelin iyo cadaadis dibadda ah.
Nasrallah ayaa ka hadlay arrimaha Syria waxana uu sheegay in maamulka Syria uu yahay nidaamka keliya dunida carabta islamarkaana fashiliyey shirqoolkii mareykanka.
Nasrallah waxa uu ku tilmaamay cidkasta oo ka shaqeysa duminta maamulka Syria in ay tahay cid u adeegaysa mareykanka iyo Israel.
Masar oo xabsi daa’im ah ku xukuntay muwaadin Masri ah iyo labo israa’iiliyiin lagu eedeeyey basaasnimo
Cairo:-Maxkamad ku taala dalka Masar ayaa ku xukuntay xabsi daa’im ah nin u dhashay Masar iyo labo sarkaal oo israa’iiliyiin ah oo lagu eedeeyey in ay u basaasayeen hay’adda sirdoonka Israel ee loo yaqaan Muusaad.
Muwaadinka Masriga ah oo lagu magcaabo Daariq C/risaaq Xuseen ayaa ka hor qirtay maxakmadda dambiyada Amaanka dowladda sare ee Qaahira in uu gacan ka siiyey sirdoonka Yuhuuda warbixino iyo macluumaad qeybo kamid dhanka isgaarsiinta Masar .
Labda saarkaal ee yuhuuda ayaa kala ah Iidii Mooshee iyo Jooseef Dimuur.
Sidoo kale maxkamda ayaa dambi ku heshay sarkaal katirsan sirdoonka Yuhuuda oo lagu magacaabo Ilaan Garaayiil kaasi oo lagu eedeeyey in uu u soo galay Masar arrimo la xiriira sirdoonka iyo in uu qoro dad iyo isku day uruurin macluumaad ku saabsan dhacdooyinkii kacdoonka 25 Janaayo.
Sidoo kale waxaa lagu eedeeyey in uu ku sugnaa goobihii mudaaharaadyada ka socdeen isagoo ku boorinayey mudaaharadayaasha in ay sameeyaan rabshado lagu waxyeeleenayo maamulka guud iyo in ciidamada iyo shacabka ay iska hor imaadaan si amaanka faraha uga baxo taasi oo waxyeeleenaysa maslaxada siyaasadeed iyo dhaqaale ee dalka Masar islamarkaan sumcad xumo u keenaysa kacdoonkii Shacabka Masar.
Dhanka kale qaar kamid ah shacabka Yuhuuda ayaa ku baaqay in la sameeyo olole warbaahineed oo Masar kadhan ah sida tii ay ku dhawaaqeen qoyska askarigii Yuhuudiga ay Xamaas afduubatay sanadii 2006 si masar cadaadis loo saaro maadaama sarkaalka ay xirtay uu sidoo kalana wato dhalasho mareykan ah.
Mauritania oo joojisay xeerka ciqaabta xiritaanka weriyaasha
Nouakchott:- Xukuumadda Mauritania ayaa si rasmi ah u ansixisay wax kabadalidda xeerka saxaafadda si loo joojiyo xiridda saxafiyiinta arrimo la xiriira faafaainta kadib markii dalabyo balaaran oo ka yimid ururada saxafiyiinta iyo hay’adaha axsaabta iyo kuwa barlamaaniga ah.
Wasiirka isgaarsiinta Mauritania ninka lagu magcaabo Xamdi Walad Maxjuub oo shir jaraa’id qabtay ayaa sheegay in xukuumadda ay go’aansatay wax kabadalidda saddex qodob oo asaasi u ah xeerka saxaafadda Mauritania iyadoo sidoo kalana aanan wax laga bedeli doonin xeerka ka yaal ciddii aflagaado u geysata madaxweynaha Jumhuuriyadda Mauritania iyo madaxda dowladaha iyo xukuumadaha ajnabiga iyo safiirada u fadhiya dalalka kale dalka Mauritania kuwaasi oo xabsi iyo ganaax lagu muteesanayo.
Dhanka kale hay’adaha saxaafadda ayaa soo dhoweeyey qaraarka xukuumadda islamarkaana waxa ay muujiyeen sida ay ugu faraxsan yihiin talaabadaas,balse madaxa saxafiyiinta Mauritania ninka lagu magcaabo Al-xuseen Walad Amduu ayaa sheegay in talaabadani ay tahay mid aan dhameystirnayn maadaama weli aan wali wax laga bedelin xeerka xiritaanka saxafiga faafiya arrimo keeni kara isir naceyb iyo midab kala sooc.
Amduu ayaa ku nuuxnuuxsaday in aysan haboonayn in lagu xiro saxafiga arrin kasta waxay doontaba ha ahaateen, isagoona ka codsaday barlamaanka in ay dhameystiraan talaabada dhankooda in ay ansixiyaan marka la soo hordhigo mashruuca lagu baabi’inayo ciqaabta xiritaanka saxafiga gabi ahaan.
Sidoo kale madaxa midowga website-yada electroniga ninka lagu magcaabo Al-taah walad Axmed ayaa ku tilmaamay qaraarkan in uu yahay mid wax ka badalyo tacadiyada saxafiyiinta dalka Mauritania kala kulmayaan dhanka xukuumadda balse waxa uu muujiyey cabsi ah in xeerkan uu dhibaato u keeno saxafiyiinta sidii qodobka 11 aad oo horey xukuumadda wax uga bedehsay kadibna u horseeday saxafiyiinta in ay ku dambeeyaan xabsi.
Indonesia oo xayiraad ku soo rogtay shaqaalaha Indonesian ka u safraya dalka Sucuudiga
Jakarta:- Xukuumadda Indonesia ayaa xayiraad ku soo rogtay muwaadiniinteeda shaqada u raadsanaya dalka Sucuudiga kadib markii ay xukuumadda sucuudiga ay seyf ku dishay haweenay Indonesian ah oo lagu eedeyey in ay dishay nin ay u shaqeenaysay.
Dilka haweenayda Indonesian-ka ayaa keenay in xukuumadda madaxweyne Soosilyoo Baambaang Yodoyono ay cabshooyin ay la kulanto dhaliil ku aadan in aysan ilaalinayn muwaadiniinteeda ka shaqeeysa dalalka dibadda oo badankood ay yihiin kuwa ka shaqeeya dhismayaasha iyo guryaha.
Madaxweynaha oo ka hadalyey TVga qaranka ayaa sheegay in xukuumadiisu ay go’aansatay in ay xayriaad ku soo rogtay u diridda shaqaalaha Indonesian-ka dalka Sucuudiga kaasina uu hergeli doono bisha agoosto 2011.
Madaxweynaha ayaa intaas ku daray in xayiraaddaas ay sii socon doonto ilaa inta Sucuudiga iyo Indonesia ay gaarayaan heshiis u ogolonaya xuquuqdooda shaqaalaha Indonesian-ka.
Dalka Sucuudiga ayaa waxa ku sugan 1.2 malyan oo shaqaale Indonesian ah kuwaasi o oil muhiim ah u ah dalka Indonesia kuwaasi oo ka gacan ka geysanaya hoos u dhiga shaqo la’aanta wadanka ugu dhaqaalaha badan koonfur bari Asia.
Ciidamada Pakistan oo soo bandhigay gabar la sheegay in ay sidatay jaakad lagu soo qariyey waxyaabaha qarxa
Islamabad:-Ciidamada Pakistan ayaa soo bandhigay gabar 9 jir ah oo la sheegay in ay wadatay jaakad lagu soo qariyey waxyaabaha qarxa si ay isugu qarxiso saldhig boolis magaalada Bishwaar.
Gabadha oo lagu magacaabo Suuhaana Jawaad ayaa u sheegtay booliska in dabley hubaysn ay ka afduuben gurigooda islamarkaana ula baxsadeen deegaan u dhow xadka u dhexeeya Afghanistan iyo Pakistan.
Suuhaana oo ka hadleysay shir jaraa’id ay soo abaabuleen booliska Pakistan deegaanka Diirusuflaa ayaa sheegtay in ay xiratay jaakad lagu soo qariyey waxyaabaha qarxa islamrkaana laga codsaday in ay isku qarxiso goob ay ku sugan yihiin koox askar ah balse ay iska siibtay jaakadii oo ay ka carartay.
Waxaa xusid mudan in gabdho lamid ah Suuhaana ay ku kacaan falal ismiidaamin ah marka laga reebo kooxo hubaysan oo Pakistaniyiin ah oo caadeysata in ay qorteen wiilal da’ yar si ay u sameeyaan weeraradaas oo kale.
Maamulka Bishwaar ayaa sheegay in aysan soo gaarin dacwad ku aadan gabar la waayey islamarkaan deegaankaan uusan horey uga dhicin falal ay kulugu leeyihiin gabdho yar yar.
Suuhaana ayaa sheegtay in labo haween ah ay afduubeen iyadoo ku sii socoto iskoolka ayna ku qasbeen in ay raacdo gaari ay saarnaayeen labo nin.
Suuhaana ayaa intaas ku dartay in mid kamid ah labada haween ay afka ka saartay maro islamrkaana uu kalumay dareenka.
Suusaana ayaa intaas raacisay in markii ay soo kacday ayna bilowday in ay qeyliso ay mid kamid ah labadii haween ay siisay Buskud kadibna ay markale uu kalumay dareenkii.
Booliska ayaa sheegay in jaakada ay ka koobnayd 9 kg waxyaabaha qarxo.
Suusaana ayaa tilmaamtay in xiliigii galabti la siiyey buskud farabada si ay u seexato , subaxdiina loo xiray jaakad lagu qariyey waxyaabaha qarxa.